Stylesdị ọkọchị: oge ​​iji were nịịka gị pụọ na ime ụlọ | Bezzia
Stylesdị oge ọkọchị: oge ​​iji were obere uwe gị pụọ na ime ụlọ
Maria onyekwere | 07/06/2021 10:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Ihe niile na-egosi na n'izu a anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ oge ọkọchị, ọ bụ ezie na na eze agaghị anyị abanye n'oge a ruo na June 21 ọzọ. Oge iwepu, ya mere, na nịịka ma ọ bụ nịịka, imepụta ụdị ndị anyị na-eketa taa.
Shorts bụ a Uwe jikọtara oge ọkọchị, ọ bụ ezie na e nwekwara ndị na-eyi ha n'oge oyi. Uwe zuru oke iji nwee ọ daysụ ụbọchị kachasị ekpo ọkụ jikọtara ya na uwe elu, uwe elu nwanyị ma ọ bụ uwe elu na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ uwe elu. You chọrọ ịma ka ha si eme ya?
Dị ka ọ dị na mbụ, Mọnde ọ bụla anyị ejirila akaụntụ nke ejiji ejiji dị iche iche kesara gị anya itoolu. Itoolu ekike uwe ya na otu ihe omuma: ha nile nwere nkpirisi ma obu nkpirisi.
Anyị nwere ike ịghọta ụdị dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị na-ezo aka n'ụdị ogologo ọkpa a. Denim nịịka ka bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu mgbe okpomọkụ abịarute, Otú ọ dị, afọ a na akwa ukwu dị mkpụmkpụ mere na akwa ọkụ dị ka linen. Nke kachasị mma, na enweghị mgbagha, ihu ụbọchị kachasị ewu ewu.
Ọ bụrụ na anyị na-ezo aka na nhọrọ dị iche iche iji jikọta ha, anyị ga-ekwukwa banyere ụdị abụọ. Nke mbụ, nke ntakịrị ume mmụọ nsọ, na-agwa anyị ka anyị jikọta ha T-uwe elu ma ọ bụ uwe elu ọcha ma ọ bụ oji ma jiri akpụkpọ ụkwụ dị larịị ma ọ bụ t-shirts mezue anya ahụ maka nkasi obi ka ukwuu.
Omume nke abụọ na-agba anyị ume ka anyị jikọta obere boho sitere na mmụọ nsọ ma ọ bụ uwe elu nwanyị. Ha nwere ike ịbụ uwe elu nwere mpempe akwụkwọ ifuru na / ma ọ bụ jiri nkọwa ejiji dị ka lace, ruffles ma ọ bụ aka uwe. Iji mezue anya gị, naanị ị ga-achọ akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ dị ala ma ọ bụ nke ọkara, ndị ị nwere ezigbo nkasi obi, na ngwa raffia.
Na-eyikwasị uwe dị mkpirikpi n'oge ọkọchị? Ka ị na-ahọrọ iyi skirts ma ọ bụ uwe mgbe ị chọrọ ịga mkpụmkpụ?
Onyonyo - @wachukwu, @bartabacmode, @onyedikachi_, @IGIHE, @ onyinye.u., @iheanacho, @nwanyi_ocha, @auroraartacho
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Stylesdị oge ọkọchị: oge ​​iji were obere uwe gị pụọ na ime ụlọ
Otu esi eme mmanu onu